Internet Ministries - Mumwe anova sei nhengo yekereke yaKristu?
Mu ruponeso rwemweya wemunhu kune zvikamu zve 2 zvinodiwa: chikamu chaMwari uye chikamu chevanhu. Chikamu chaMwari chikamu chikuru, "Nokuti nenyasha makaponeswa kuburikidza nerutendo, uye izvo zvisipo kwamuri, chipo chipo kuna Mwari, kwete nemabasa, kuti kusava nemunhu angazvikudza" (VaEfeso 2: 8-9). Rudo urwo Mwari akanzwa kumunhu rwakamutungamirira kutumira Kristu munyika kuti adzikinure munhu. Upenyu uye dzidziso yaJesu, chibayiro pamuchinjikwa, nekuparidzirwa evhangeri kuvarume vanoita chikamu chaMwari muruponeso.
Kunyange zvazvo chikamu chaMwari chiri chikamu chikuru, chikamu chevanhu chinodikanwa kana munhu ari kusvika kudenga. Munhu anofanira kutevera mitemo yekuregererwa iyo Ishe yaakazivisa. Chikamu chemunhu chinogona kujekesa zvakajeka mumatanho anotevera:
Inzwa Evhangeri. "Vachadana sei kuna iye wavasina kutenda, uye vangatenda sei vaasina kunzwa?" Vachanzwa seiko pasina muparidzi? " (VaRoma 10: 14).
Tenda. "Uye pasina rutendo hazvibviri kumufadza, nokuti uyo anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti ariko, uye kuti mubairo wevanomutsvaka" (VaHebheru 11: 6).
Tendeuka zvitadzo zvakare. "Nguva dzekusaziva saka Mwari akaregerera, asi iko zvino anorayira vanhu kuti vose vapfidze kwose kwose" (Mabasa 17: 30).
Bvuma Jesu saShe. "Firipi akati," Kana iwe ukatenda nomwoyo wako wose, iwe unogona. "Akapindura akati," Ndinotenda kuti Jesu Kristu ndiye Mwanakomana waMwari "(Mabasa 8: 36 -37).
Bhabhatidzwa nokuda kwekuregererwa kwezvivi. "Petro akati kwavari, Tendeukai mubhabhatidzwe mumwe nomumwe wenyu nezita raJesu Kristu kuregererwa kwezvivi zvenyu uye muchagamuchira chipo cheMweya Mutsvene" (Mabasa 2: 38).
Urarame hupenyu hwechiKristu. "Imi muri rudzi rwakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, vanhu vaMwari, kuti muratidze kunaka kweiye wakakudanai kubva murima muchipinda muchiedza chake chinoshamisa" (1 Peter 2: 9).